Dominoes 🥇 Pinda uye unakirwe kubva kuemulator.online
Dominoes. Mutambo wemasimba wakanyanya ane mukurumbira pasi rese uye anotamba nezviuru zvevanhu. Mukuungana kwemhuri, denderedzwa revamwe shamwari, mapato, nyama yekubheka, pakupera kwevhiki, nezvimwe.
Iyi ingangove mumwe weyakare mitambo iyo kune mareferenzi.
Dominoes: maitiro ekutamba nhanho nhanho😀
Chii chinonzi dominoes?
Domino mutambo webhodhi unoshandisa zvidimbu zvemakona emakona, inowanzo kupihwa ukobvu hunovapa iyo chimiro cheparallelepiped, mune chimwe chechiso chinoratidzwa nemadota anoratidza kukosha kwenhamba.
Izwi iri rinoshandiswa zvakare kududza wega zvidimbu zvinoumba mutambo uyu. Iri zita rinogona kunge rinobva mukutaura kwechiLatin "mahara domino" ("Ndatenda Ishe"), zvakataurwa nevapristi vekuEurope kuratidza kukunda mumutambo.
Nhamba yevatambi: 4
Zvimedu: Zvidimbu makumi maviri nemasere nemativi kubva pa28 kusvika pa0.
Zvidimbu pamubatanidzwa: Zvidimbu zvinomwe zvemumwe neumwe anenge achipinda.
Chinangwa chemutambo: ita makumi mashanu.
Domino chidimbu: chidimbu chakagadzirwa nemicheto miviri, imwe neimwe iine nhamba (mienzaniso yezvidimbu: 2-5, 6-6, 0-1).
Maitiro ekuisa zvidimbu?: kana chidimbu chikaiswa padhuze ne chimwe chine kana nhamba imwechete yakafanana (semuenzaniso: 2-5 machisi 5-6).
Kupfuura mukana: kana mutambi asina chidimbu chinokwana chero magumo.
Mutambo wakavharwa: kana pasina mutambi ane chidimbu chinokwana kumagumo ese.
Ndiani anokunda mutambo?: apo mumwe wevatambi anokwanisa kupererwa nezvidimbu muruoko rwake, achinge akwanisa vese.
Kutamba sei maDominoes?🁰
Zvidimbu "zvakasungwa" patafura, uye mutambi mumwe nemumwe anotora 7 zvidimbu zvekutamba. Mutambi anotanga mutambo ndiye uyo ine chidimbu 6-6🂓. Tanga mutambo nekuisa chidimbu ichi pakati petafura. Kubva ipapo, tamba uchipesana newachi.
Mutambi wega wega anofanirwa kuyedza kukwana zvimwe zvezvimedu zvavo kuzvidimbu panopera mutambo, imwe panguva. Kana mutambi achikwanisa kukwana chidimbu, iyo yekutenderera inopfuudzwa kune anotevera mutambi. Kana mutambi asina chidimbu chinokwana mativi ese, ndinofanira kupfuura mukana, pasina kutamba chero zvidimbu.
El mutambo unogona kupera mumamiriro maviri: kana mutambi achikwanisa kurova mutambo, kana kana mutambo wavharwa. Mutambi wekutanga nguva ino achave mutambi kurudyi kwemutambi wekutanga kubva kumutambo wapfuura.
Kana chero mutambi akunda mutambo: timu yako inotora mapoinzi ese kubva kuzvidimbu zviri mumaoko evavengi.
Kana mutambo wakakiiwa: mapoinzi ese akawanikwa neumwe neumwe akaverengwa.
Iwo maviri ane mashoma mashoma mapoinzi ndiye anokunda, uye anotora mapoinzi ese evaviri vanopikisa. Kana paine tie mune ino poindi kuverenga, iwo maviri akavharidzira mutambo anorasikirwa uye vaviri vanokunda vanotora mapoinzi ese kubva kune vaviri ava. Iwo poindi yevaviri vakunda anounganidzwa uye mutambo unopera kana mumwe wevaviri achisvika makumi mashanu poindi.
Iyo poindi kukosha kwechikamu chimwe nechimwe chinoenderana nechiyero chemitengo yemipendero miviri yechidimbu. Naizvozvo, chidimbu 0-0 chakakosha 0 mapoinzi, chidimbu 3-4 chakakosha mapoinzi manomwe, chidimbu 7-6 chakakosha gumi nemaviri, zvichingodaro.
Mutambo une vatambi vana, vanoumba vaviri vaviri, uye vanofanirwa kugara mune dzimwe nzvimbo.
dzidziso inogamuchirwa ndeyekuti ingadai yakaonekwa kuChina pakati pa243 kusvika 181 BC , Yakagadzirwa nemusoja anonzi Hung Ming.
Panguva iyoyo, zvidimbu zvacho zvaive zvakafanana nekutamba makadhi, kumwe kugadzirwa kwenyika, uye vaitodaidzwa "mavara ane mavara" .
Kumadokero, hapana chinyorwa chemasimba kusvika pakati pezana ramakore regumi nemasere, payakaonekwa mukati France neItaly, zvakanyanyisa mumatare e Venice neNaples, iko kwaishandiswa mutambo sekuvaraidza.
Kumira kunotevera kunoratidzika kunge kwaive England, yakaunzwa na Vasungwa veFrance mukupera kwezana remakore rechiXNUMX.
Kubva ipapo zvichienda mberi, zvinoenderana nekufunga kwedu uye neruzivo rwekutanga rwezvakaitika, asi isu tinongogona kutenda vatorwa, kugamuchirwa kana kwete, vakaunza mutambo uyu kunzvimbo dzeSpanish.
Chinhu chemutambo uye kushongedza
Diki, rakapetana uye rekona rectangle, Dominoes anogona kugadzirwa kubva kwakasiyana zvinhu, senge huni, bhonzo, dombo, kana plastiki.
Shanduro dzinodakadza, dzakatumirwa nevanoda mutambo uye vateresi, dzakagadzirwa nemabhuru, granite uye nesipo.
Iyi mienzaniso yakanatswa inowanzoiswa mumabhokisi akasarudzika, anowanzo gadzirwa nevelvet, uye anoratidzwa seyechokwadi ekushongedza zvinhu.
Kufanana nemakadhi ekutamba, ayo ari akasiyana, iwo madomasi anotakura zvitupa mamaki kune rumwe rutivi uye haana chinhu kune rimwe.
Chiso chine chitarisiko chechimedu chimwe nechimwe chakakamurwa, netambo kana kumusoro, kuita mativi maviri, rimwe nerimwe rakatarwa nemadheti, seaya anoshandiswa mu data, kunze kwenzvimbo shoma dzinosara. chena.
Mune yeEuropean vhezheni yemutambo, pane zvimwe zvinomwe zvidimbu kupfuura mumaChinese, zvinokwana zvikamu makumi maviri nemasere
Ipo ibwe rine nhamba yepamusoro mumatanho edu akaenzana riri 6-6🂓, dzimwe nguva maseti mahombe anosvika kusvika pa9-9 (zvidimbu makumi mashanu neshanu) uye anosvika gumi nemaviri kusvika gumi nemaviri (makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe) anoshandiswa.
Iyo Inuit yekuNorth America inoridza vhezheni yedhomino ichishandisa maseti ane zvidimbu zana nemakumi mana nesere.
MuChina, uko kugona kwemutambo kunoratidzika kunge kusingagumi, iyo MaDominoes akashanda sehwaro uye modhi yemutambo wakafanana asi wakaomesesa: mahjong .
Ndezvipi zvakanakira nekuipira madomasi?
Chero mutambo une zvayakanakira nezvayakaipira, kunyangwe yekare seyedominoes. Zvakanakira ayo kutenderedza hupfumi hwemutambo uye nezvakaipira zvayakaipira zvakasarudzika.
Kutanga nezvakanakira, chimwe chazvo ndechekuti mutambo weese mazera, nekuti zviri nyore kunzwisisa, kuungana nekubata zvirinyore, uye zvakadaro nenhamba huru yemazano ekufadza avo vanotamba kwenguva yakareba.
Mukati meiri rakakura zera boka pane akati wandei mabhenefiti ekuziva, senge kusimudzira kwekunzwisisa- masvomhu kukura kweiye mudiki, wehurongwa hwekufunga kune vakuru uye ndangariro kwevakwegura.
Pakupedzisira, mutambo unoshanda. Nenzvimbo yakatwasuka uye vangangoita vatambi vaviri, zvichave zvakakwana kutanga mutambo.
Asi kunyangwe mutambo une zvakawanda zvakanakira une zvimwe zvinhu zvidiki zvinogumbura. Kutanga nenyaya yekuti kune vatambi vana chete, zvirinani mumitambo mizhinji. Zvakaoma kufadza boka hombe, semuenzaniso.
Chimwe chinokanganisa ndeye "finesse" kumisikidza mutambo, semitambo mizhinji yemabhodhi kana kunyange mitambo yebhodhi. Zvidimbu zvakaunganidzwa pasina chero mhando yekugadzirisa. Kumwe kurovera kwakanyanya patafura uye ndizvozvo.
ZvidimbuMuchokwadi, zvinokanganisa mavari, zvirinani kana zvarasika, nekuti zvidiki, kana zvinopera, kurasikirwa nekuonekwa kwavo kana kukosha kwazvo, mupfungwa yemadota.
Kuungana kuri nyore uye kubata
Yakarasika uye / kana yakasakara zvikamu
Iyo inonyanya kufarirwa online scams